Home » အသားပေး » ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စေ, La La မြေတွင်အနုပညာတစ်ဦးလုပ်ငန်းခွင်ရိုက်ကူး
ဂိမ်းနှောင်းပိုင်းမှငါနောက်ဆုံးတော့ကိုမြင်လျှင် la la မြေ နှင့်ဤရုပ်ရှင်၏မူလတီထွင်ဖန်တီးမှုအားဖြင့်အထင်ကြီးခြင်းနှင့်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ ကဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ထုတ် churned သည်အခြားမကြာသေးမီရုပ်ရှင်မတူဘဲ ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်စက်, la la မြေ ကျနော်တို့က 'ခေတ်ပြိုင်ရုပ်ရှင်' 'ပဌနာဒီဖန်တီးမှုလွင်ပြင်၌ရှိသောသစ်ပင်ပွိုဖြစ်ကြောင်းရုပ်ရှင်သီလကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
တစ်ဦးအဖြစ် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ နှင့်ဓာတ်ပုံဆရာ, ငါသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကွက်နှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်းကင်မရာ relished ။ စင်ကြယ်သောမှော်။ la la မြေ အစစ်အမှန်များနှင့်ရိုးသားခံစားရပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးနှစ်ဆယ်မိနစ်များစွာကိုအချိန်လေးဘို့, ငါကြုံနေရခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောအာရုံနှင့်အတူစောင့်ကြည့်ခဲ့ရာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Exposition အဆိုပါ 80 နှင့် 90 ရဲ့ထံမှကားများ nondescript တစ် gridlocked LA ကဖလှယ်မှုများ၏ထိပ်ပေါ်မှာကခုန်မြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ မီယာ (Emma Stone) သူမ၏သို့ခုန်လာသောအခါမှသာနောက်ပိုင်းခေတ်ပြိုင်ကားတစ်စီးတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခု join ပါဘူး Prius - ဒါကြောင့် LA က။ ကြောင်းကိစ္စသည်ကျွန်မရုပ်ရှင်၏နောက်ဆုံးတတိယသည်အထိသတိထားမိတည်းသောခေတ်ပြိုင်ကားတစ်စီးဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ retro အဝတ်အစားလွမ်းဆွတ်နှင့်ယေဘုယျစမတ်ဖုန်းများနှင့်ဖြစ်ပါသည် Seagull ၏သိုးစုကို အဖုံးတီးဝိုင်းတစ်ဦးအချိန်နေရာ, ဒါပေမယ့်သတ်မှတ်မဝတ်ပြုကြလော့။ ဆိုတဲ့အချက်ကို la la မြေ မည်သည့်တိကျသောယုဂ်မှကျောက်ချရပ်နားမဟုတ်ပါကအချိန်ကျော်လွန်တဲ့နတ်သမီးပုံပြင်-ပုံပြင်အရည်အသွေးကိုပေးခြင်းကြောင့်ရုပ်ရှင်၏မှော်ခံစားဖို့ကထပ်ပြောသည်သောဤ timeless ချေးငှားသည်။
ပြဇာတ်ရုံထဲကနေအိမ်ပြန်နောက်မှငါဒီမှော်ရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပုံကိုသုတေသနပြု။ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး Epiphany - la la မြေ ရုပ်ရှင်အပေါ်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်! Linus Sandgren, ဓါတ်ပုံပညာ၏ဒါရိုက်တာ, အမြိုးမြိုး၏ရုပ်ရှင်-ပစ်ခတ်မှု-junkie ဖြစ်ပါတယ်။ သူက "တစ်ဦးကရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ရိုးရှင်းစွာရုပ်ရှင်နှင့်အတူပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ " လို့သူကပြောပါတယ်အဖြစ်, ရုပ်ရှင်အတူလုပ်ကိုင်အနေနဲ့အနုပညာပုံစံကယုံကြည်သည်
မိမိအရုပ်ရှင်တွေထဲကအများစုဟာ, တဦးတည်း၏ချွင်းချက်နှင့်အတူရုပ်ရှင်အပါအဝင်အပေါ်သေနတ်နှင့်အများဆုံးအထူးသနေကြတယ်, American Hustle ဇာတ်ကားမှ နှင့် တရာ Foot ခရီး။ ဒါပေမယ့်စက်မှုလုပ်ငန်းရိုက်ကူးဖို့နောက်ကျောကိုဝိုငျးသလဲ? ဒီတစ်ခါလည်းလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနှင့်သင် NYU စာတမ်းဇာတ်ကားအပါအဝင်ရုပ်ရှင်အပေါ်ပစ်ခတ်ခံရစီမံကိန်းများကိုများများမြင်ရပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်။
ရုပ်ရှင်ပညာရိုက်ကူးခြင်း၏အများစုများအတွက် la la မြေ သေနတ်ခဲ့သည် 35mm 2x anamorphic 4-စွမ်းဆောင်ရည် 2.55: 1 ရုပ်ရှင်ရုံမြင်ကွင်းကျယ် anamorphic ကို C series နှင့်အီးစီးရီး Prime နှင့်အတူ Panavision XL2 ရဲ့ကင်မရာကိုသုံးနိုင်သည်။ Sebastian [ရိုင်ယန် Gosling] ပရိသတ်ကိုအတွက်မီယာနဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်မှာစန္ဒရားကစားတဲ့အခါမှာချိန်ခွင်လျှာ 16MM အပေါ်အဆုံးသတ်ရေးအိပ်မက် sequence ကိုတစ်ဘို့ anamorphic ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါအဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့မြေပေါ်မှာရုပ်ရှင်၏ဖွင့်လှစ်မြင်ကွင်းတစ်ခု Cinemoves ကျနော်တို့အတိတ် 20 နှစ်ပေါင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဖို့အပျော်အပါးခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဖလော်ရီဒါကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကတစ်ဦး technocrane နှင့်အတူအဓိကအားပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ technocrane တစ်ဦးဘီစကွတ်အငယ်တန်း, တစ်ဦးတည်း-of-a-ကြင်နာအသံတိတ် "မောင်းနှင်မှု Process ကိုနောက်တွဲယာဉ်" ၏ထိပ်ပေါ်မှာအကြံအဖန်ခဲ့သည်။ ဤသည် Dolly, တစ်ချိန်တည်းမှာတိုးချဲ့နှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဖို့ technocrane enabled ။
(ထိုက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ပါ apcamcars.com/equipment/Biscuit%20Jr နှင့် Vimeo, အစစ်အမှန်ကဒီမှာ Demo vimeo.com/198165867.
တစ်ဦးက Steadicam လည်းဒီ sequence ကို၏အဘို့ကိုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါရိန်း၏အရိပ်နှင့်ကွန်ကရစ်ခှဲခွားမွို့ရိုးကိုတိုက်ခိုက်နေပြီးမြောက်ဖို့မျိုးစုံရက်ပေါင်းလိုအပ်ခန့်လုပ်ကိုင်ဖို့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင်သေနတ်ပစ်အများအပြားအဆင့်ဆင့်အပေါ်တစ်ဦးကတိကဝတ်ကြာပါသည်။ ပထမဦးဆုံးစိန်ခေါ်မှုကုန်ကျစရိတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကဲ့သို့တူညီသောကြောင်းထုတ်လုပ်သူများစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Sandgren ကုန်ကျစရိတ်အလွန်နီးကပ်ဖြစ်ကြောင်းစောဒကတက်သည်။ သငျသညျရုပ်ရှင်သုံးပြီးရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာသင်နှင့် hard drive တွေ "အစုံပေါ်တွင်" DIT ရဲ့စျေးကြီးတဲ့မော်နီတာပပျောက်။ တစ်ခုခုကိုလမ်းသင်ဆဲရုပ်ရှင်နေ့စဉ်သတင်းစာများကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရှိသည်။
သုတေသနပြုနေစဉ်, ငါ Panavision စံ anamorphic မျက်ကပ်မှန်ကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်လို့မရပါဘူးကတည်းကထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အများအပြားမျက်ကပ်မှန်စေခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Panavision Sandgren တင်းကျပ်စွာဖြစ်, ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်ရိုက်ချက်များဘို့ဆွဲထုတ်ခွင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာသုံးပေထက်အာရုံစူးစိုက်နိုင်မယ့်ထုံးစံ 40MM မှန်ဘီလူးတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဆက်ဆက်, Panavision အတော်ကြာကင်မရာငှားရမ်းခအိမ်များရုပ်ရှင်ကင်မရာ, ထုံးစံ anamorphic မှန်ဘီလူးဒီဇိုင်းများနှင့်ထောက်ခံမှုလိုအပ်သောဤအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်အပေါ်လေလံနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပေမယ့်အနည်းငယ်ငှားရမ်းအိမ်များစွမ်းရည်ဒီလိုမျိုးရှိသည်။ Panavision မှချွတ်ဦးထုပ်!
ဒုတိယစိန်ခေါ်မှု - သို့မဟုတ်သီလ - ရုပ်ရှင်၏သတ်မှတ်ချက်အပေါ်အမှန်တကယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဦးဒါရိုက်တာအဖြစ်, သင်တို့ကိုငါသာပြန်လည်နှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့သွန်းအတိုကောက်အားလပ်ချိန်အဘို့အလျင်မြန်မိနစ်လပ်ချိန်အတင်းအကျပ်, တကျိပ်တပါးမိနစ်ရုပ်ရှင်လှိမ့်နိုင်သည်ကိုသတိပေးခံရမြိန်ရေရှက်ရေ။ ရုပ်ရှင်နှင့်ပိုမိုတင်းကြပ်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့သငျသညျတွန်းအားပေး ရရှိနိုင်အလင်း"ဟုအဆိုပါဖန်တီးခြင်းနှင့်လိမ်သူတို့ရဲ့နည်းလမ်းနှင့်အတူဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာများနဲ့မတူပဲ အလင်း"တစ်ဦးတောင်းဆိုနေတာရိုက်ကူးအချိန်ဇယားကိုဖြည့်စွက်ရန်။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သင် anchors နှင့် set ကိုအပေါ်တကယ်အရေးကြီးသောအရာကိုအပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုတောင်းဆိုနေပြီ: စွမ်းဆောင်ရည်, လူတွေ, ထိရောက်မှုနှင့်သဘာဝအလင်း။
ဒါရိုက်တာ Damien Chazelle နှင့် DP Sandgren တဦးတည်းညဦးယံ၌ကြာ, နေ့ရက်များစွာအပေါ် "မှော်နာရီ" မှာရိုက်ကူးရိုက်ကူးမတိုင်မီရက်ပေါင်းနှင့်လကြာပာ rehearsing နှင့်လေးသုံးခုအတွက်နောက်ဆုံးရိုက်ကူးရရှိအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ဒီပင်ပန်းကြမ်းတမ်းအချိန်ဇယားဖို့အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုမှာကျနော်တို့ကရုပ်ရှင်ထဲတွင်မြင်အံ့သြဖွယ်နှောင်းပိုင်းတွင်နေ့လည်ခင်းမိုးကောင်းကင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ပို့စ်တွင် composited နေကြသည်တူပေမယ့်မရှိကြပေ။ ဤမျှလောက်များစွာသောမြင်ကွင်းများအတွက် la la မြေ ကင်မရာဌာနအနည်းငယ်ဒုတိယအခွင့်အလမ်းတွေကိုပေးခြင်းရှည်လျားတယူကင်မရာရွေ့လျားဖြစ်ကြသည်။ ဗီဒီယိုမှအလုပ်လုပ်နေစဉ်ညဥ့်မြင်ကွင်းများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဆွဲကူညီရန်အာရုံ puller တစ်ခုအကြွင်းမဲ့အာဏာဝက်ဝံပါပြီရမယ်!
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ DP Sandgen ရုပ်ရှင်စတော့ရှယ်ယာများ၏သီလကဉျြးရုံးဖျော:
ရုပ်ရှင်အပေါငျးတို့သအရောင်များကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်။ အရောင်ခွဲခြာနှင့်ကြွယ်ဝသောတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအဆိုပါ celluloid ရုပ်ရှင်ဖမ်းမိဘာလဲ, နှင့်ပစအတွက်ရွှဲနေတဲ့သာမန်အဆင့်အထိဖြစ်ပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွက်ရွှဲ၏ဤအဆင့်ကိုအောင်မြင်ရန်, သင်ကပစအတွက်ရွှဲမြှင့်တင်ရန်ဖူးလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အရောင်မျိုးစုံဒစ်ဂျစ်တယ် neg အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပြီမဟုတ်ပေ။
တနည်းကား, ရုပ်ရှင်ပညာရိုက်ကူးခြင်းအဘို့, နေ့ခင်းဘက်အပြင်3ASA မှာ rated နှင့်အသေးစိတ်စပါး, ပျော့ပြောင်းပြီးဆနျ့ကငျြဘအဘို့အလုပ်ငန်းများ၌ -250 ရပ်နားဆွဲထုတ်, Kodak VISION5207 100D အရောင်အပျက်သဘောဆောင်သောရုပ်ရှင် 1 အပေါ်ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ အတွင်းပိုင်းနေ့ညဉ့်မပြတ်လူအပေါင်းတို့မိုဃ်းမလင်းမှီနှင့်ည Kodak VISION3 500T အရောင်ပေါ် 5219 ASA rated အပျက်သဘောဆောင်သောရုပ်ရှင် 200, သေနတ်နှင့်အသေးစိတ်စပါး, ပျော့ပြောင်းပြီးဆနျ့ကငျြဘအဘို့အလုပ်ငန်းများ၌ -1 ရပ်နားဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ဆွဲအပြောင်းအလဲနဲ့အတူကျွမ်းတဝင်မရှိသောသူတို့အဘို့, ကအောက်မှာ-ဖွံ့ဖြိုးဆဲက overexposed ရုပ်ရှင်များအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်ကြိုးစားကြောင်း technique ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနေတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဲအပြောင်းအလဲနဲ့လေ့မြင့်မားသည့်ယှဉ်အခြေအနေများအောက်တွင်တစ်ဦးအောက်ပိုင်းဆနျ့ကငျြဘ image ကိုရယူအသုံးပြုသည်။
မတူဘဲ la la မြေကြောင့်သာထိရောက်စွာဖို့ပေမယ့်လွယ်ကူသောကွောငျ့: "ကင်မရာထဲမှာ" အနည်းငယ် feature ကိုရုပ်ရှင် "ကင်မရာထဲမှာ" ပစ်ခတ်နေကြသည်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းမှု, အမြင်အာရုံ EFX နှင့်ဝါယာကြိုးဖယ်ရှားရေးပစ်ခတ်မှုထက် ကျော်လွန်. ယူကြပြီ။ ဒါဟာမတိုင်မီ၎င်းထိုသို့တာ 80 နှင့် 90 ရဲ့များတွင်အသုံးပြုနည်းလမ်းများကဲ့သို့ဖြစ်၏ကတည်းကဒါရိုက်တာနှင့်တစ်ဦး DP ဤနည်းအလုပ်မလုပ်ဖို့ရွေးချယ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မကိုသဘောကျ အနီရောင် နှင့် Alexa ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာများ။ ရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများ၏ဤရှုထောင့်ကိုတွေ့ရှိခြင်းလန်းဆန်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင်ထို retro ရုပ်ရှင်နည်းစနစ်၏ဘုနျးကွီးသောအသုံးပြုမှု, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းနှင့်အရည်အသွေးသရုပ်ဆောင်နှင့်ကွက်မှတပါးအဘယ်ငါပုံပြင်အကြောင်းကိုကြိုက်တယ် Chazelle နှင့်စတူဒီယိုတချို့မသိမသာကွဲပြားဒရာမာနှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်မကြောက်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဟောလိဝုဒ် မပျော်နောက်ဆုံးတွင်မုန်းသူတို့မရှိသလောက်အစိမ်းရောင်ထုတ်လုပ်မှုသို့သွားကြဖို့သက်ရောက်စေရ။ လုယူသောသူသတိပေးချက်! ရုပ်ရှင်ရဲ့အဆုံးမှာစန္ဒရားကစား Sebastian ရဲ့ကအရမ်းကိုသာယာလှပတဲ့အိပ်မက် sequence ကိုစဉ်အတွင်း, ငါသည်ဤသည်သူ၏အဖြစ်မှန်ခဲ့စေလိုကြောင်း။ ငါ Sebastian နှင့်မီယာမှသာရလဒ်အားဖြင့်စိတ်ပျက်ခံရဖို့အဘို့အအမြစ်တွယ်။ သူတို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာပေမယ့် - မီယာအောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးဖြစ်လာသည်, Sebastian တစ်ဦးလူကြိုက်များဂျက်ဇ်ဂီတကလပ်ပိုင်ရှင် - မီယာခိုင်မာသော-in-a-ဝတ်စုံကိုမှလက်ထပ်သည်နှင့် Sebastian တစ်ဦးတည်းကသူ့ကလပ်မန်နေးဂျင်းတက်အဆုံးသတ်ထားသည်။
ဒီရုပ်ရှင်အားလုံးအပေါ်မှာရေးထားလျက်ရှိ၏အော်စကာရှိပါတယ်, ဒါကြောင့် Sandgren အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် & Chazelle အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာ scooped အနိုင်ရကြောင်း unsurprising ပါပဲ။ အဲဒီမှာဒီရုပ်ရှင်စေရန်ပိုမိုလွယ်ကူနည်းလမ်းတွေဆက်ဆက်ခဲ့ကြသည်, သို့သော်အော်စကာအသိအမှတ်ပြုမှုရုပ်ရှင်အပေါ်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံတစ်လှလှပပသဘောပေါက်အပိုင်းအစလုပ်ရှိသမျှကိုမှတ်တိုင်များထွက်ဆွဲ၎င်းတို့၏ကတိကဝတ်တစ်ညိတ်သည်။
ရုပ်ရှင်ရုံမြင်ကွင်းကျယ်နှင့်ရုပ်ရှင်အပေါ်, La La မြေရိုက်ကူး! www.engadget.com/2015/02/05/kodak-deal-for-movies-on-film/
Celluloid တစ်ဦးကတစ်ကျော့ပြန်ကို: ရုပ်ရှင်အပေါ်သေနတ်ပစ်၏ပြန်ခေါင်းထောင်လာသော NYU မှကြွလာ
အဆိုပါကင်မရာကိုတစ်ဦးကချေသည်သည်: DP Linus Sandgren သူနှင့် Damien Chazelle, La La မြေ Shot ဘယ်လိုမှတဆင့်ကြှနျုပျတို့ကိုလမျးလြှောကျ
သမတ at Moving ရုပ်ပုံငှားရမ်းခြင်း
ဒါဝိဒ်သည်ဝဲလ်တစ်ထုတ်လုပ်သူ, ဒါရိုက်တာ / ကင်မရာမင်း, အသက်ရှင်ခြင်းကိုရှည်နည်းပညာရှင်များနှင့်ရုပ်ပုံငှားရမ်းခြင်း Moving ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတတစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ငှားရမ်းအိမ်တော်ဖြစ်၏။ ရေတွင်းဟာထိခိုက်တီဗီစီးရီးမိုင်ယာမီဒုအပေါ်တစ်ဦး PA ဆိုပြီးအဖြစ်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ရေတွင်းများကတည်းကထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဂီတဗီဒီယို, ကြော်ငြာ, ရုပ်မြင်သံကြားဘဏ်ဍာနှင့် Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကော်ပိုရိတ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအလုံးအရင်းညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အများစုမှာမကြာသေးမီက, ဝဲလ် Covergirl, PwC, Harley Davidson နှင့် CNN ကယ့်သူရဲကောင်းများများအတွက်အကြောင်းအရာအနိုင်ရ Addis ဆုထုတ်လုပ်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စေ, La La မြေတွင်အနုပညာတစ်ဦးလုပ်ငန်းခွင်ရိုက်ကူး - ဇွန်လ 29, 2017
2015 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း UHD / 4K / HD ကို viarte Warsaw ကို	2017-06-29
ယခင်: အနီရောင်ဧရာ 24 နာရီ Flash ကိုရောင်းရန် - သေနတ်သမား Suite 25 နှင့် PluralEyes 13 ဟာ Off 4.1%
နောက်တစ်ခု: DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအပိုသီးသန့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ 25th နှစ်မြောက်ပွဲ Continues